Kuqubuka uvoyizana ogqokweni kolwaseSudan - Bayede News
Iziphathimandla zaseSudan seziphethe izimpahla ezinemali ebezixhasa iminyaka iqembu iHamas, nokucacisa ukuthi leli lizwe lasebenza kanjani njengendawo yokuvikela leli qembu lamasosha asePalestine ngaphansi komholi wangaphambili u-Omar al-Bashir.
Ukuthathwa kwezinkampani okungenani eziyishumi nambili izikhulu ezithi zixhumene neHamas kusizile ukusheshisa ukubuyisana kweSudan neNtshonalanga kusukela kugumbuqelwa uBashir ngowezi-2019. Ngonyaka odlule, iKhartoum inqobile ukususwa ohlwini lwabaxhasi lobuphekula olwaziwa ngokuthi yi-U.S State Sponsers of Terrorism List (iSST) lwase-USA kanti futhi leli lizwe lisendleleni yokuthola ukuxolelwa esikweletini esingaphezu kwezigidigidi ezingama-$50.
IHamas ilahlekelwe yisizinda sayo esikwelinye izwe lapho amalungu nabasekeli baleli qembu bangahlala khona, bonge imali, futhi bahambisa izikhali nezimali zase-Iran eGaza Strip, kusho abahlaziyi baseSudan nabasePalestine. Impahla ebanjiwe echazwe yimithombo esemthethweni yaseSudan kanye nemithombo yezobunhloli yasentshonalanga ikhombisa ukufinyelela kwalawo manethiwekhi.
Ngokusho kweziphathimandla zethimba elalisungulwe ukuqeda umbuso kaBashir, okuthathiwe kufaka izindlu, amasheya ezinkampani, ihhotela elisendaweni ephambili yaseKhartoum, ihhovisi lokushintshisana, isiteshi sethelevishini, kanye namahektare angaphezu kwesigidi epulazini.
ISudan yaba yisikhungo sokukhwabanisa imali nokuxhasa ngezimali ubushokobezi, kusho uWagdi Salih, oyilungu elihola phambili leli thimba elaziwa ngokuthi yiCommittee to Dismantle the June 30, 1989 Regime and Retreive Public Funds. Lolu hlelo “beluyisembozo esikhulu, isambulela esikhulu, ngaphakathi nangaphandle”, kusho uSalih.
Umthombo wezobunhloli waseNtshonalanga uthe kusetshenziswe amasu eSudan ajwayelekile ebugebengwini obuhleliwe: Izinkampani zaziholwa ngabaninimasheya abaphathiswa, imali eqoqwayo eqoqwa ngokheshi, nokudluliswa okwenziwa ngezikhungo zokushintshisana.
UBashir wayiseka wangafihla iHamas futhi wayenobungani nabaholi bayo.
“Bathole ukuphathwa kahle kumathenda ayekhishwa , ukuthethelelwa kwentela, futhi bavunyelwa ukuthi badlulisele imali eHamas naseGaza ngaphandle kwemingcele,” kusho ilungu lesigungu somsebenzi, elikhulume lingathandanga ukudalulwa.
ONobhala Jikelele beNhlangano Yezizwe abadabuka e-Afrika
Uhambo lweSudan ukusuka embusweni oseka leli qembu kuya ekubeni nobuhlobo ne-USA kusahamba kancane. Eminyakeni eyishumi ngemuva kokuba uBashir ethathe izintambo zombuso ngonyaka we-1989 izwe laba yisizinda samaqembu amaSulumane anamandla, lavikela u-Osama Bin Laden iminyaka eminingana, futhi labekwa unswinyo yi-USA ngenxa yokuxhumana namasosha asePalestine.
Ngokuhamba kwesikhathi uBashir wazama ukuziqhelelanisa nobuSulumane obunzima, wengeza ukubambisana kwezokuphepha neWashington. Ngowezi-2016 iSudan yanquma ubudlelwano ne-Iran kwathi ngonyaka olandelayo unswinyo lwezohwebo lwaseMelika olubhekiswe eKhartoum lwachithwa ngemuva kokuthi iWashington yamukele ukuthi ukwesekwa kombuso yiHamas kwaphela. Kodwa kuze kube ukuwa kukaBashir, amanethiwekhi abekade esekela iHamas ahlala ekhona.